Home » Vaovao momba ny fitaterana » Ny mpiasa VIA Rail Canada Montréal dia manaporofo fa miabo amin'ny COVID-19
Ny mpiasa VIA Rail Montréal dia manaporofo fa miabo amin'ny COVID-19
VIA Rail Canada (VIA Rail) Nampandrenesina fa ny iray amin'ireo mpiasany miasa ao amin'ny Montréal Maintenance Center dia voasedra tsara Covid-19 ny Alahady 24 may 21 Tsy mbola niasa ity mpiasa ity nanomboka ny Alakamisy XNUMX Mey, tamin'io fotoana io dia tsy nisy soritr'aretina.
Satria ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpiasanay no laharam-pahamehana aminay, avy hatrany dia nandray ny fepetra mifanaraka amin'izany izahay:
Ireo mpiasa izay nifandray mivantana tamin'ny mpiara-miasa aminy dia nitokantokana nanomboka ny May 22. Nanomboka tamin'izay dia nampandrenesina izy ireo ny amin'ilay toe-javatra ary nangatahana izy ireo hijanona irery ary hanara-maso ny soritr'aretin'izy ireo mandritra ny 14 andro manaraka.
Mifanaraka amin'ny torolàlana avy amin'ny Public Health Agency of Canada, ny dingana rehetra ilaina amin'ny Protocol de la protection dia naparitaka.
Ny famongorana tanteraka ny faritra iasana dia natao mba hiantohana ireo mpiasa afaka manohy miasa am-pilaminana.
Ny fepetra fanalefahana ataonay dia miasa tanteraka ary miantoka ny fanadiovana matetika ny faritra iraisana dia tanterahin'ireo mpiasan'ny fanadiovanay amin'ny alàlan'ny vokatra desinfectants rehetra nankatoavin'ny Health Canada izay voaporofo fa mahomby amin'ny COVID-19.
Eo amin'ny sehatry ny asa tanterahin'ity mpiasa ity, sy ny fepetra fiarovana izay noraisin'ilay olona tamin'ny fanajana ny halaviran'ny vatana sy ny fitaovany fitaovam-piarovana ilaina manokana, dia mijanona ho kely ihany ny loza ateraky ny fandotoana mety hitranga.
Mifandray hatrany amin'ny mpiasanay izahay ary manome ny fanampiana rehetra ilainy mba hahasitrana azy amin'ny toe-javatra mety indrindra. Miaraka aminy sy ny fianakaviany ny eritreritray mandritra izao fotoan-tsarotra izao.
VIA Rail dia manohy manitsy ny asany ary mampiditra protokolota iray henjana amin'ny fepetra fidiovana ao anaty fiaran-dalamby, ao amin'ireo gara, foibe fikojakojana ary ivon-telefaona ho setrin'ny areti-mandringana ary mba hampihena ny fiparitahan'ny COVID-19. Izahay dia nametra ny isan'ny seza azo namandrihana tao anaty fiaran-dalamby mba hanomezana toerana lavitra lavitra ho an'ny mpandeha rehefa mandeha izahay.
Ankoatr'izay, ampahatsiahivinay hatrany ny mpandeha sy ny mpiasa ny maha-zava-dehibe ny fanarahana ny tolo-kevitry ny manampahefana misahana ny fahasalamam-bahoaka, mijanona ao an-trano, misoroka ny dia tsy ilaina, manao fanazaran-tena lavitra araka izay azo atao, ary manaraka faran'izay tsara ny fomba fidiovana (manasa tanana matetika miaraka amin'ny savony sy rano mandritra ny 20 segondra farafahakeliny, mikohaka na mievina ao anaty sela na ny soroky ny sandriny, aza asiana mikasika ny masony, orona na vavany nefa tsy manasa tanana aloha).
Mba hamerana ny loza ateraky ny fampielezana COVID-19, VIA Rail dia nanoro hevitra ny mpandeha rehetra mba hisaron-tava na saron-tarehy tsy manarona izay manarona ny orona sy ny vava rehefa mandeha amin'ny lamasinina ary rehefa tsy azo atao ny manaja ny halavirana 2 metatra amin'ny hafa.
Ny mpandeha dia holavina tsy hiditra amin'ny fiaran-dalamby raha miaina soritr'aretina mitovy amin'ny sery na gripa (tazo, kohaka, fahasosorana miaina) na raha nolavina izy ireo nivezivezy tao anatin'ny 14 andro lasa noho ny antony ara-pahasalamana mifandraika amin'ny COVID-19.
VIA Rail dia manohy manara-maso ny fivoaran'ny COVID-19 ary hijanona amin'ny fifandraisana akaiky amin'ireo sampan-draharahan'ny fahasalamam-bahoaka sy ny governemanta federaly sy ny faritany.